I-Bahrain-G STAR YOKUTHENGA KUNYE
ILANGA yasekwa ngo-2013, singumboneleli oqeqeshiweyo kunye noveliso olukhethekileyo kwimveliso yeTire yokulungisa iGaraji kunye nenkonzo ye-DIY. Iqela lethu lithatha uMoya weNkalipho ukuya kuMceli mngeni, ukuYila ubuNtsha kunye nokuziGqibela ngokwakho, ukubambelela kwiXabiso loPhuculo lokufunda nokukhula ngesishwankathelo.
ILANGA ILUNSOUL isekwe kwifilosofi yeshishini esemgangathweni wokuqala kunye nenkonzo ephezulu, emva kokuqhubeka okuqhubekayo kunye nophuhliso, iqela lethu landisiwe lisuka kwiTire Valve, Wheel Weight kunye neTire yokulungisa iPatch. Uyilo lweeKhithi zoLungiso lweTire, iivili zeemoto zevoliti, i-Wheel spacer kunye neadaptha kunye nezixhobo zokuLungisa iiMoto noomatshini. Asikhuthazi ngokuzimeleyo kuphela uphawu lweSUNSOUL, kodwa sikwabonelela ngeemveliso ezizenzekelayo kubathengi be-ODM.
ILANGA idala ukukhula okunenzuzo ngokusebenzisa ipotifoliyo yeshishini efanelekileyo ukuqinisekisa impumelelo ezinzileyo. Silandela ukugqibelela kunye nokugqwesa. Abasebenzi ababalaseleyo sisiseko sempumelelo yenkampani. Inkcubeko yethu ibonakaliswa kukuqina, ukungafihli nto kunye nokuhloniphana. Siyabakhuthaza abasebenzi ukuba babe ngabanini kwaye bakhule kunye nenkampani.
ILANGA inombulelo ngentsebenziswano yawo onke amaqabane ethu. Siyabulela iqela lethu ngegalelo labo kwaye silibonile ixabiso lethu kweli qonga. Vumela amava ethu akukhonze. Masisebenzisane ukuze sizalisekise amaphupha ethu.
Senza kwaye unikeze iintlobo ezahlukeneyo zoomatshini bokulungisa isinyithi
Ngobuchwephesha bethu obuphambili kunye neqela leengcali, sikhula ngokukhawuleza.Ngobuchwephesha bethu obuphambili kunye neqela lobuchule, sikhula ngokukhawuleza.
Izixhobo zethu zoomatshini zihlala zibekwa apha. Indawo yokusebenzela inkulu ngokwaneleyo ukulungiselela amawaka oomatshini abakhulu. Indawo yendawo yokusebenzela imalunga ne-2000 yeemitha zesikwere.